Wasiirka beeraha oo kormeeraya Miyiga Jabuuti - Sabahionline.com
Wasiirka beeraha oo kormeeraya Miyiga Jabuuti
Wasiirka Beeraha iyo Xoolaha ee Jabuuti, Maxamed Axmed Cawaale ayaa kormeer ku maraya baaddiyaha dalka si uu u soo arko xaaladaha nololeed ee dadka reer miyiga ah, La Nation-ta Jabuuti ayaa Isniintii (5-ta March) werisay. Qodobbo la xiriira
Barasaabka Dikhil oo la dagaallamaya shaqo la’aanta iyo hayaanka reer miyiga
Jabuuti iyo Emirates Future oo saxiixay heshiis kor loogu qaadayo kalluumaysiga
Cawaale wuxuu sheegay in uu doonayo in uu isagu idhihiisa ku arko in ay dadka deegaanka ahu biyo heli karayaan iyo in ay xoolahoodu caafimaad qabaan. Wuxuu sheegay in kormeerkiisu uu awood u siin doono in uu cabbiro jawaabna u raadiyo dhibaatooyinka ay wajahayaan bulshooyinka reer miyiga ah, tanuna waa qayb ka mid ah go’aanka ay dawladdu ku doonayso in ay hagaajiso nolosha reer miyiga. Meel ka mid ah meelaha uu istaagay, ayaa saraakiisha Medeho waxay Cawaale u sheegeen sida ay abaarta iyo xaaladaha nololeed ee qallafsan u saameeyeen dadka deegaanka, waxaanay wasiirka ugu baaqeen in uu baritaaro wax soo saarka beeraha. Cawaale ayaa markaa ka dib kormeeray ceelasha tamarta qorraxda ku shaqaynayey ee tuulada oo markaa jabnaa, ka hor intaanu u sii gudbin Waddi, ayay jariidaddu sheegtay. Ma jeclaysatay maqaalkan?